ဘာလို့ဂရုစိုက်ခံချင်ကြတာလဲ? - For her Myanmar
ချစ်သူရည်းစားရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပထမတစ်လနှစ်လလောက်က အဆင်ပြေပြေနဲ့ တုန်နေအောင်ချစ်ကြပြီး ၃,၄ လလောက်ကြာတော့ ကတောက်ကဆလေးတွေ စဖြစ်လာကြပြီလေ။ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေ၊ စိတ်ကောက်သဝန်တိုတာတွေ၊ ရစ်တာကိုမခံနိုင်တာမျိုးတွေ၊ ဂရုစိုက်မခံရလို့စိတ်ပျက်အားငယ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နှင်းဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာလေးကတော့ ဂရုစိုက်ခံချင်ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကနေ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့်ဂရုစိုက်ခံချင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဂရုစိုက်ခံချင်လဲမေးရင် အဖြေကအရမ်းရှင်းတယ်ရော်။ ချစ်လို့ပေါ့။ ဂရုစိုက်ခံချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ ဟိုးတစ်ကယ့်သေးသေးပိစိကွေးကစ အရိပ်တကြည့်ကြည့် လိုက်ကြည့်ခိုင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ဘာများလုပ်နေမလဲဆိုတဲ့ သိချင်စိတ်လေးတစ်ခု၊ ငါ့ကိုသတိရနေပါလားဆိုတဲ့အသိလေးတစ်ခုကို တောင့်တတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကြောက်တဲ့စိတ်က အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့အတူရှိမနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့များအတူရှိနေမှာလဲ? ဘယ်သူနဲ့ဘာတွေပြောနေလို့ ငါ့ကိုစကားလေးတောင်လာမပြောတာလဲဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက အရမ်းကိုခံရခက်ပြီး ပြောပြရခက်တဲ့ စိတ်အခြေအနေပါ။ ဘယ်သူမဆို အတိတ်က အခြေအနေတွေ ရှိကိုရှိခဲ့ကြမှာပါပဲ။ ထိုနည်းတူပဲ ဒီအခြေအနေတွေကို လက်မခံချင်လည်း အတင်းမေ့ပျောက်ပြီး ဟန်ကိုယ့်ဖို့နေလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေလဲအများကြီးရှိဦးမှာပါ။ ဒီဒဏ်ရာတွေအနာကျက်ဖို့၊ အားလုံးကိုလုံးဝမေ့ပျောက်လိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလဲရုန်းထွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်သလို တစ်ဖက်လူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကလဲ အရမ်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် အရမ်းစိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာ လူမသိတဲ့သိမ်ငယ်စိတ်တစ်မျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ မရှိသေးတဲ့အရာတစ်ခုကို ပုံဖော်နိုင်စွမ်းအရမ်းကောင်းတာမို့ မရှိသေးတဲ့အရာတစ်ခု၊ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်လောက်မယ့်အရာတစ်ခုကို စလယ်ဆုံး တိတိကျကျပုံဖော်နိုင်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လုံခြုံမှုမရှိကြတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ဖြစ်စေ၊ တခြားသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူနဲ့ဖြစ်စေ စိတ်ချလက်ချ မနေနိုင်တာမျိုးပေါ့။ ‘မင်းက အလကားနေ ဒရာမာတွေချိုးနေတာကိုး’၊ ‘အလကားအလုပ်မဟုတ်တာကိုလိုက်ခံစားနေတာ’ ‘ပြီးခဲ့တာတွေကို ခဏခဏပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အသစ်ပြန်လုပ်နေတယ်’ ‘သူလည်း သူ့ဘာသာနေနေပြီကို ဘာကိစ္စနဲ့လိုက်လိုက်တူးဆွနေတာလဲ’။ ဒီစကားလုံးတွေက သူတို့တွေကို တခြားလူတွေက လက်ညှိုးထိုးကြတဲ့ စွဲချက်တွေပါ။ ဟုတ်ပြီ သူတို့ကဒီလိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့ ခဏခဏပြဿနာရှာလို့ ငြီးငွေ့လာတယ်ဆိုရင် သူတို့အပေါ်ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာအောင် ဘယ်အရာကတွန်းပို့ခဲ့သလဲ? ဘာတွေက သူ့ကို ဒီလိုတွေတွေးစေတာလဲ? စသည်ဖြင့်ပြန်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
အားနေတိုင်းသူ့စိတ်မှာ ဖြစ်သမျှလိုက်ရှင်းပေးနေရအောင် သူ့အုပ်ထိန်းသူမှ မဟုတ်တာဆိုပြီးတွေးမယ်ဆိုရင် ခံစားရတဲ့လူကလဲ ဘာသွေးတော်သားစပ်နေလို့ စိတ်ပူပြီးလိုက်ပြောနေမှာလဲ? ဖြစ်နေကျမို့ လက်လွတ်စပယ်ထားလိုက် ပြီးသွားမှာဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေက တော်ရုံတန်ရုံလောက်ဆို လူမသိလိုက်ဘဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြေရှင်းတတ်ပေမယ့် တကယ် သူတို့က ထုတ်ပြောလာပြီဆို ရင်ထဲစုလာတာ အရမ်းများသွားလို့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့သဘောပါ။ ဒီလိုမျိုးတွေက လွှတ်ထားပေးပါလို့ပြောပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မွန်းကြပ်တာအရမ်းများလာပြီး ထွက်ပေါက်လိုချင်တတ်ကြတဲ့လူတွေ၊ ဘေးကလူတွေထက်တောင် အရာရာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လွှတ်ချလိုက်ချင်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်လူရဲ့စကားတစ်ခွန်း၊ အပြုအမူတစ်ခုဟာ သူ့အပေါ်အရမ်းကြီးသက်ရောက်မှု များပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ အပြန်အလှန် စကားသံတွေ နားထောင်ပေးတာမျိုးတွေ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ပြန်ငဲ့ကြည့်တာမျိုးတွေ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံက ဒုတိယနတ်ဘုရားဆိုပေမဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဂရုစိုက်တာမျိုးတွေ ယုတ်လျော့လာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ပျက်၊ စိတ်ကုန်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေရာစီဝေးနေကြတဲ့လူတွေဆို တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး စကားတွေပြောဖို့ အခွင့်မသာသေးတဲ့အချိန် ‘ရင်ဘတ်ချင်းနီးနေဖို့ပဲလိုတယ်။ အပေါ်ယံတွေလိုအပ်လို့လား?’ ‘ဘယ်သူ့အတွက် ကြိုးစားနေတာလဲသိရဲ့သားနဲ့’ ‘ခဏလေးပဲခွဲရမှာ ဒီခဏလေးတောင်သည်းမခံနိုင်ဘူးလား’ ‘အနားမှာရှိပြီးသား လူတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ပြီးသားမို့ လုပ်စရာရှိတာပဲလုပ်မယ်။’ ဒီစကားတွေကအထောက်အကူဖြစ်သင့်သလောက်ဖြစ်ပေမယ့် ချစ်တယ်ဆိုတာကိုမဖော်ပြတတ်ရင် ရင်ထဲကအစိုင်အခဲတစ်လုံးသည် ဘယ်လိုမှပြိုပျက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုထုဇဉ် လူသားတွေမို့ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံက တဖျပ်ဖျပ်ခုန်နေသရွေ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးလိုချင်ကြမှာပါ။ ချစ်နေရင်ပြီးရော အချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသာသိလာလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုး ရှေ့ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိလောက်တော့မယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းဆိုတာလဲ ပုံပြင်သာသာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်ဆီက လူတစ်ယောက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာ ‘ချစ်ခြင်းမေတ္တာ’ ပါ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်း၊ပိုက်ဆံ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ဒါတွေအားလုံးမရှိသေးတဲ့ (သို့) မရှိတော့တဲ့နေ့တစ်နေ့အထိ အတူလက်တွဲပြီးအားပေးမယ့် အေးအတူပူအမျှ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို လိုအပ်တာပါ။ အပေါ်ယံဆိုပေမယ့် ရှိရှိသမျှအချိန် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်နိုင်ဘဲ ဒီဂရုပဲ အမြဲစိုက်နေရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေးနေသည့်တိုင်နွေးထွေးနေဆဲဆိုတဲ့ ခပ်သေးသေးလေးတစ်ခုသာ လိုအပ်ပါတယ်။ ငါမရှိလည်း သူနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကို လက်ခံသွားတဲ့တစ်နေ့ အဲ့ဒီတစ်နေ့ဟာ တစ်သက်လုံး လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ဖို့မတွေးခဲ့တဲ့လူက ကျောခိုင်းသွားမယ့်တစ်နေ့ပါပဲ။ အချိန်မှီပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေ။
Hnin Ei Oo February 7, 2018